Kuxabise Ukuba Nesisa Nengqiqo KukaYehova | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“UYehova ulungile kubo bonke, neenceba zakhe zikuyo yonke imisebenzi yakhe.”—INDU. 145:9.
Ziziphi iimpawu ezimbini zikaYehova esimele sizixabise ngakumbi?
Sinokumxelisa njani uYehova ngesisa?
Ziziphi iindlela esinokumxelisa ngayo uYehova ngengqiqo?
1, 2. Liliphi ithuba eliya kuxhanyulwa ngabahlobo bakaYehova?
OMNYE udade uMonika uthi: “Sineminyaka engama-35 sitshatile, ibe sesisazana kakuhle nomyeni wam. Nakuba sesinexesha elide kangako, kusekho izinto ezintsha esizifumanisayo ngathi!” Le meko injalo nakweminye imitshato emininzi nkqu nezihlobo.
2 Siyavuya xa sisiya sibaqonda abo sibathandayo. Kubo bonke ubuhlobo esinokubakha abukho obubaluleke njengokuba ngumhlobo noYehova. Asinakuze sazi yonke into ngaye. (Roma 11:33) Siya kuqhubeka ngonaphakade sixhamla ithuba novuyo lokufunda ngakumbi ngeempawu zikaYehova.—INtshu. 3:11.
3. Siza kuxubusha ngantoni kweli nqaku?
3 Inqaku elandulela eli liye lasinceda sakuxabisa ngakumbi ukungeneka nokungakhethi buso kukaYehova. Ngoku makhe sixubushe ezinye iimpawu ezithandekayo ezimbini zikaYehova—ukuba nesisa nengqiqo. Oko kuya kusinceda siqonde ngokupheleleyo ukuba “uYehova ulungile kubo bonke, neenceba zakhe zikuyo yonke imisebenzi yakhe.”—INdu. 145:9.
4. Kuthetha ukuthini ukuba nesisa sokwenene?
4 Kuthetha ukuthini ukuba nesisa? Impendulo siyifumana kumazwi kaYesu akwiZenzo 20:35: “Kunoyolo ngakumbi ukupha kunokwamkela.” Ngaloo mazwi alula kangako, uYesu wayichaza kakuhle eyona nto ithethwa sisisa sokwenene. Umntu onesisa, ukulungele ukusebenzisa ixesha lakhe, amandla nezinto zakhe ukuze ancede abanye—esenjenjalo ngovuyo. Isisa asijongwa ngobungakanani besipho, kodwa ngeentsusa zalowo uphayo. (Funda eyesi-2 Korinte 9:7.) Akakho umntu onesisa ngaphezu koYehova, ‘uThixo onoyolo.’—1 Tim. 1:11.
5. Ziziphi iindlela uYehova asibonisa ngazo isisa anaso?
5 UYehova usibonisa njani isisa? Wanelisa iintswelo zabantu bonke, kuquka ezabo bangekamkhonzi. Enyanisweni, “uYehova ulungile kubo bonke.” ‘Ulenza ilanga lakhe liphume kubantu abangendawo nabalungileyo nemvula uyinisa kubantu abangamalungisa nabangengomalungisa.’ (Mat. 5:45) Yiloo nto umpostile uPawulos waxelela abangakholwayo ukuba, uYehova ‘wabenzela okulungileyo, ebanika iimvula ezivela ezulwini namaxesha emveliso, ezalisa iintliziyo zabo ngokutya nangokuchwayita.’ (IZe. 14:17) Kucacile ukuba, uYehova unesisa kubantu bonke.—Luka 6:35.
6, 7. (a) Ngoobani uYehova avuyiswa ngokukhethekileyo kukunyamekela iintswelo zabo? (b) Chaza umzekelo obonisa ukuba uThixo uyabanyamekela abanquli bakhe abathembekileyo.
6 UYehova uvuyiswa ngokukhethekileyo kukunyamekela iintswelo zabakhonzi bakhe abathembekileyo. UKumkani uDavide wathi: “Ndakha ndangumfana, kungokunje ndimdala, kodwa andikaboni nabani na olilungisa eshiywe ngokupheleleyo, nenzala yakhe ifuna isonka.” (INdu. 37:25) AmaKristu amaninzi athembekileyo aye azibonela ngokwawo uYehova ewanyamekela. Nanku umzekelo.
7 Kwiminyaka ethile edlulileyo, umshumayeli wexesha elizeleyo uNancy wazibona esengxakini. Uthi: “Ndandidinga i-R570 yokuhlawula irenti kusuku olulandelayo. Ndandingazi ukuba iza kuvela phi loo mali. Ndathandaza ngaloo ngxaki, ndaza ndaya kumsebenzi wam wobuweyitara. Ndandingalindelanga kuphiwa mali ngobo busuku kuba yayingeloxesha lixakekileyo. Ndamangaliswa kukufika kwabathengi abaninzi ngobo busuku. Ukugqiba kwam ukusebenza, ndathi xa ndibala imali endiyiphiweyo ndafumanisa ukuba yi-R570.” UNancy weyisekile ukuba sisisa sikaYehova esamnceda wafumana kanye loo mali wayeyidinga.—Mat. 6:33.
8. Sisiphi esona sipho sikhulu sesisa sikaYehova?
8 Esona sipho sesisa sikaYehova sifumaneka kumntu wonke. Sisiphi eso? Lidini lentlawulelo loNyana wakhe. UYesu wathi: “UThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze wonk’ ubani obonisa ukholo kuye angatshabalali kodwa abe nobomi obungunaphakade.” (Yoh. 3:16) “Ihlabathi” ekuthethwa ngalo apha luluntu. Ewe, esi sipho sikhulu sikaYehova sinokufunyanwa nguye wonk’ umntu osamkelayo. Abo babonisa ukholo kuYesu baza kuzuza ubomi ngokuyintabalala—ubomi obungunaphakade! (Yoh. 10:10) Abukho ubungqina obungaphezu kobu bokuba uYehova unesisa!
YIBA NESISA NJENGOYEHOVA
AmaSirayeli akhuthazwa ukuba axelise isisa sikaYehova
(Funda isiqendu 9)
9. Singamxelisa njani uYehova ngesisa?
9 Singamxelisa njani uYehova ngesisa? UYehova ‘usinika zonke izinto ngokobutyebi ukuze sizinandiphe’; kungenxa yoko, sifanele ‘sikulungele ukwabelana’ nabanye, ukuze nabo bonwabe. (1 Tim. 6:17-19) Sisebenzisa ubuncwane esinabo ukuze siphe abo sibathandayo ngoxa sinceda nabo basweleyo. (Funda iDuteronomi 15:7.) Yintoni enokusinceda sihlale sikhumbula ukuba nesisa? Amanye amaKristu ancedwa koku: Nanini na efumana isipho, aye akhangele ithuba lokuba nawo aphe omnye umntu isipho. Ibandla lamaKristu lisikelelwe ngenyambalala yabazalwana noodade abazabalazela ukuba nesisa.
10. Yiyiphi enye yeendlela eziphambili zokuba nesisa?
10 Enye yeendlela eziphambili zokuba nesisa kukuzinikela ngamazwi nangezenzo. Singakwenza njani oko? Ngokuchitha ixesha namandla ethu ekuncedeni nasekukhuthazeni abanye. (Gal. 6:10) Ukuze sibone indlela esiqhuba ngayo, sinokuzibuza oku: ‘Ngaba abanye bayabona ukuba ndikulungele ukubanceda nokuphulaphula izinto ezibaxhalabisayo? Ukuba kukho umntu ocela ndimncede kwinto ethile, ngaba ndiye ndivume xa ndikwazi? Ndagqibela nini ukukhe ndincome ilungu lentsapho okanye lebandla ngokunyanisekileyo?’ Xa ‘siziqhelisa ukupha,’ sitsho sisondele ngakumbi kuYehova nakubahlobo bethu.—Luka 6:38; IMize. 19:17.
11. Ziziphi ezinye iindlela zokuba nesisa kuYehova?
11 Omnye umntu esinokuba nesisa kuye nguYehova. IZibhalo zithi: “Beka uYehova ngezinto zakho zexabiso.” (IMize. 3:9) Ezi ‘zinto zexabiso’ ziquka ixesha, amandla nobuncwane, sizisebenzise ngokuzithandela kwinkonzo yakhe. Nabantwana abancinane banokufunda ukuba nesisa kuYehova. UJason onabantwana uthi: “Xa intsapho yethu inikela kwiHolo yoBukumkani, sinika abantwana imali ukuze ibe ngabo abayifaka kwiibhokisi zeminikelo. Bayayithanda le nto kuba xa beyifaka, ‘banikela kuYehova okuthile.’” Abantwana abakhule benikela kuYehova, badla ngokuqhubeka besenjenjalo naxa bebadala.—IMize. 22:6.
12. Kutheth’ ukuthini ukuba nengqiqo?
12 Olunye uphawu olusitsalela kuYehova yingqiqo. Kuthetha ukuthini ukuba nengqiqo? Igama lantlandlolo elidla ngokuguqulelwa ngokuthi “ingqiqo” kwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha ngokoqobo lithetha “ukuyekelela.” (Tito 3:1, 2.) Umntu onengqiqo akanyanzelisi ukuba kusoloko kubanjelelwa emthethweni, engabi ngqongqo ngokungeyomfuneko, okanye abe ngqwabalala. Kunoko, uzabalazela ukuthantamisa xa esebenzisana nabanye, ecinga ngeemeko zabo. Ukulungele ukuphulaphula abanye, yaye xa kufanelekile, uyayekelela kwizinto abazifunayo azame ukuncama ezo zifunwa nguye.
13, 14. (a) UYehova uyibonisa njani ingqiqo? (b) Sifunda ntoni ngokuba nengqiqo kwindlela uThixo awamphatha ngayo noLote?
13 UYehova ubonisa njani ukuba unengqiqo? Ucingela iimvakalelo zabakhonzi bakhe, yaye usoloko ekulungele ukuyekelela kwizicelo zabo. Umzekelo woku yindlela uYehova awaphatha ngayo indoda elilungisa uLote. Xa uYehova wayeza kutshabalalisa izixeko iSodom neGomora, wanika uLote umyalelo ocacileyo wokuba abalekele ezintabeni. Kodwa ngezizathu ezithile, uLote wacela ukubalekela kwenye indawo. Khawufane ucinge—uLote wayecela ukuba uYehova atshintshe imiyalelo yakhe!—Funda iGenesis 19:17-20.
14 Kungalula ukuba sithi uLote wayebuthathaka okanye engathobeli. Ngapha koko, uYehova wayenako ukulondoloza uLote enoba kuphi na, ngoko asivakali isizathu sokuba uLote oyike. Inyaniso kukuba uLote wayesoyika le wayeyoyika, waza ke noYehova wayekelela. Wamvumela ukuba abalekele kweso sixeko, nakuba uYehova wayegqibe ekubeni asitshabalalise. (Funda iGenesis 19:21, 22.) Kucacile ukuba, uYehova akakho ngqongqo engekho ngqwabalala. Uyayekelela yaye unengqiqo.
15, 16. UMthetho kaMoses wawubonisa njani ukuba uYehova unengqiqo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni)
15 Omnye umzekelo wokuba nengqiqo kukaYehova siwubona kuMthetho kaMoses. Ukuba umSirayeli uhlwempuzekile engenakukwazi ukunikela ngemvu okanye ibhokhwe, wayenokunikela ngamahobe amabini okanye amavukuthu. Wayesithini xa kunzima kwaloo mahobe mabini? UYehova wayemvumela ukuba anikele ngentwana yomgubo. Kodwa, nantsi inkalo ebalulekileyo: Wayengenakunikela ngawo nawuphi na umgubo, yayimele ibe ‘ngumgubo ocolekileyo,’ lowo kwakusamkelwa ngawo iindwendwe ezibalulekileyo. (Gen. 18:6) Ibaluleke ngantoni le nkalo?—Funda iLevitikus 5:7, 11.
16 Masithi ungumSirayeli yaye uhlwempuzeke gqitha. Njengoko ufika emnqubeni nomgubo omncinane oza kunikela ngawo, ubona izityebi zisiza kubingelela ngemfuyo. Usenokuziva uhlazekile ngomnikelo wakho obonakala kungekho yawo. Kuthi kusenjalo ukhumbule ukuba uxabisekile phambi koYehova. Kwenziwa yintoni oko? Kaloku, uYehova wayalela ukuba ibe ngumgubo oxabisekileyo. Enyanisweni, uYehova wayesithi kumaSirayeli ahlwempuzekileyo: ‘Ndiyaqonda ukuba akunamandla okunikela njengabanye, kodwa ndiyazi ukuba undinika okona kulungileyo unako.’ Ngokwenene, uYehova ubonisa ingqiqo ngokucingela iimeko zabakhonzi bakhe aze angafuni okungaphaya kwamandla abo.—INdu. 103:14.
17. Yiyiphi inkonzo oqinisekileyo ukuba uYehova uyayamkela?
17 Kuyasithuthuzela ukwazi ukuba ngenxa yokuba nengqiqo, uYehova uyayamkela inkonzo yethu yomphefumlo uphela. (Kol. 3:23) Udade okhulileyo waseItali uConstance wathi: “Ukuncokola nabanye ngoMdali wam yeyona nto bendisoloko ndiyithanda gqitha. Yiloo nto ndisashumayela yaye ndiqhuba izifundo zeBhayibhile. Maxa wambi, ndikhathazwa kukungakwazi ukwenza okungakumbi ngenxa yempilo. Kodwa ndiyaqonda ukuba uYehova uyawazi amandla am kwaye uyandithanda, uyakuxabisa oko ndikwaziyo ukukwenza.”
XELISA UYEHOVA UBE NENGQIQO
18. Yiyiphi enye indlela abazali abanokuwuxelisa ngayo umzekelo kaYehova?
18 Sinokumxelisa njani uYehova ngokuba nengqiqo? Phinda ucinge ngendlela uYehova awamphatha ngayo noLote. NguYehova owayenegunya; kodwa wamphulaphula uLote xa ekhupha iimvakalelo. Wenza ngokwesicelo sikaLote. Ukuba ungumzali, ngaba unowukuxelisa lo mzekelo kaYehova? Zama ukuphulaphula izicelo zabantwana bakho, uze xa kufanelekile, uyekelele kuloo nto bayifunayo. IMboniselo kaSeptemba 1, 2007, yathi enye indlela yokwenza oku kukuba xa abazali beza kubeka imithetho yendlu, bababize abantwana babekho. Ngokomzekelo, abazali banokugqiba ngexesha lokuba sendlwini ibe banelungelo lokwenjenjalo. Sekunjalo, abangamaKristu banokufuna uluvo lwabantwana babo ngelo xesha. Kwezinye iimeko, abazali banokufuna ukwenza utshintsho kwelo xesha loo gama nje kungaphulwa imigaqo yeBhayibhile. Abazali banokufumanisa ukuba xa bethetha nabantwana ngaphambi kokubeka imithetho yendlu, abantwana bayiqonda ngakumbi loo mithetho baze bayithobele.
19. Abadala banokumxelisa njani uYehova ngokuba ngengqiqo?
19 Abadala bebandla bazabalazela ukuba nengqiqo njengoYehova ngokucingela iimeko zabazalwana babo. Khumbula ukuba uYehova wayeyixabisa neminikelo yamaSirayeli ahlwempuzekileyo. Ngokufanayo, kukho abazalwana noodade abangakwaziyo ukuchitha ixesha elininzi kubulungiseleli, ngenxa yeengxaki zempilo okanye ukwaluphala. Kuthekani xa betyhafiswa yiloo meko yabo? Abadala babaqinisekisa ngobubele ukuba bayathandwa nguYehova ngokwenza kwabo konke okusemandleni.—Marko 12:41-44.
20. Ngaba ukuba nengqiqo kuthetha ukuyekelela umxakatho ekukhonzeni uThixo? Cacisa.
20 Kakade ke, asimele sibhidanise ukuba nengqiqo nokuyekelela umxakatho enkonzweni kaThixo kuba nje sizisizela. (Mat. 16:22) Asifuni kwenza uphela sonwabe sizingxengxezele ngokuthi sinengqiqo. Kunoko, sonke simele ‘sizibhokoxe ngamandla’ kwizilangazelelo zoBukumkani. (Luka 13:24) Enyanisweni, sizama ukulungelelana kwimigaqo emibini. Siyazibhokoxa enkonzweni kaThixo, ngoxa kwelinye icala sikhumbula ukuba uYehova akaze afune oko kungaphaya kwamandla ethu. Xa sisenza konke okusemandleni, simele siqiniseke ukuba siyamkholisa. Ngaba akusivuyisi ukukhonza iNkosi enengqiqo noxabiso ngolo hlobo? Kwinqaku elilandelayo, siza kuxubusha iimpawu ezimbini ezingakumbi ezisitsalela kuYehova.—INdu. 73:28.
“Beka uYehova ngezinto zakho zexabiso.”—IMize. 3:9
(Funda isiqendu 11)
“Nayiphi na into eniyenzayo, yenzeni ngomphefumlo uphela.”—Kol. 3:23 (Funda isiqendu 17)